Torture Archive - PixelHELPER ဖောင်ဒေးရှင်းမှလူ့အခွင့်အရေးနှင့်အလင်းအနုပညာ
18 ဇန်နဝါရီ 2019
Raif Badawi နဲ့ Julian Assange တို့အတွက်တိုက်ပွဲဝင်မှာပါ။
စေးကပ် post ကို By အိုလီဗာ Bienkowski On 18 ။ ဇန်နဝါရီလ 2019
Raif Badawi ကိုထောင်မှလွှတ်ပေးရမည်။ ချက်ချင်း!
PixelHELPER နှင့် London African Gospel Chor တို့သည် Belmarsh ထောင်ရှေ့တွင်ဂျူလီယန်အက်ဆန်းအတွက်“ အလွန်အစွမ်းထက်သောအရာတစ်ခုခု” ကိုဖျော်ဖြေနေသည်။
Donald Trump အားဖြင့်ဂျူလီယန်အဆန်းနှင့်အက်ဒွပ်စနိုးဒန်ကိုလွှတ်ခြင်း
#Wikileaks နှင့် Stella Moris တို့၏ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Angela Merkel သည်နိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့်တောင်းခံရန်နှင့်ဂျူလီယန်အက်ဆန်းမှလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပေးရန်တောင်းဆိုသည်
မင်းရဲ့တိုင်းပြည်ကမင်းအတွက်ဘာလုပ်ပေးနိုင်မလဲလို့မမေးပါနဲ့၊ Assange အတွက်မင်းဘာလုပ်ပေးနိုင်မလဲဆိုတာမပြောပါနဲ့၊ ဂျွန်အက်ဖ်ကနေဒီရဲ့သမိုင်းအစဉ်အလာကိုဘာလင်ရှိအမေရိကန်သံရုံးမှာထွန်းလင်းတောက်ပသည်။ စစ်ရာဇ ၀ တ်မှုများကိုပုံမှန်ကျူးလွန်သောအမေရိကန်များသည်ထောင်နှင့်ချီသောသားကောင်များကိုသတ်ဖြတ်ခဲ့သောဗီယက်နမ်စစ်ပွဲမှစစ်သွေးကြွများထံမှအီရတ်စစ်ပွဲတွင်အသတ်ခံခဲ့ရသောဂျာနယ်လစ်များထံမှသူတို့၏ထုတ်ယူခွင့်ကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းရမည်။
ရုံးတင်စစ်ဆေးမှုနောက်နေ့အတွက်မှတ်စုရေးပါ။ 25.02 ။ ယူနိုက်တက်စတိတ်မှထုတ်ယူခြင်းအတွက်ရုံးတင်စစ်ဆေးသည့်နေ့ရက်သည်။
အမှန်တရားကိုဤမျှကြာအောင်လျှို့ဝှက်ထားခဲ့ပြီးမည်သည့်အစိုးရမှဂျူလီယန်နှင့်ပူးပေါင်းခြင်းမရှိသောကြောင့်အင်္ဂလိပ်ကိုအမေရိကန်များထံလွှဲပြောင်းပေးလိမ့်မည် ထို့ကြောင့်ယခုလတွင်ပြည်ပရှိအမေရိကန်သံရုံးများ၊ အိမ်ဖြူတော်နှင့်ပြည်ပရှိအမေရိကန်အဆောက်အအုံများအားအလင်းတန်းဆန္ဒပြမှုများနှင့်အနုပညာဆိုင်ရာအနှောင့်အယှက်များဖြင့်စတင်ပြောကြားပါမည်။
ဒီငွေရရန်အတွက် ၃၃၃ ယူရိုလား ၅ ယူရိုရှိသလောက်နည်းနည်းလေးကူညီပေးပါ။ သင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချသင့်သည့်အပေါ် အခြေခံ၍ မနက်ဖြန်၏သတင်းအချက်အလက်အရည်အသွေးအတွက်တစ်ခုခုလုပ်ပါ။
အများပြည်သူတန်ဖိုးဖြင့်လျှို့ဝှက်စာများကိုလက်ခံရရှိခြင်းနှင့်ဖြန့်ဝေခြင်းသည်ရာဇ ၀ တ်မှုကျူးလွန်လျှင်သတင်းစာကမည်သည့်အရာထပ်မံတင်ပြနိုင်သနည်း။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လျှို့ဝှက်ချက်တွေကိုလျှို့ဝှက်ထားတာကအစိုးရကဆုံးဖြတ်တာပဲ။
ဆန့်ကျင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ပါဝါ၏အလွဲသုံးစားမှု #Assange အံ့သြဖွယ်ကောင်းသည်။ သူသည်သေနိုင်လောက်သည့်အမြင့်ဆုံးလုံခြုံရေးအကျဉ်းထောင်တွင်ပြင်းထန်စွာနေမကောင်းဖြစ်နေသည်။ ကင်းထောက်ကိုကယ်တင်သောသူသည်လွတ်လပ်မှုကိုကယ်တင်သည်။ စနိုးဒန်သည်မော်စကိုတွင်ဆက်လက်နေထိုင်သည်။ အကြောင်းမှာအနောက်နိုင်ငံများအားလုံးကအမေရိကန်၏လက်စားချေမည်ကိုစိုးရိမ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
@wikileaks ၂၀၁၀ ခုနှစ်မှစ၍ အမေရိကန်အစိုးရ၏ရန်သူဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျွန်တော်တို့ချက်ချင်းလွှတ်ပေးရန်တောင်းဆို #JulianAssange လန်ဒန်ရှိသူ၏ထောင်ချကနေ။ ဘုရင်မကြီးသည်သူ့အားချက်ချင်းခွင့်လွှတ်ပြီးနိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့်ပေးရမည်။
အဆိုပါဥရောပဖမ်းဝရမ်းသည့်နိုင်ငံရေးပြိုင်ဘက်ကိုညှဉ်းဆဲဖို့အသုံးပြုမရသင့်တယ်။ အဆိုပါဂျာမန်တရားစီရင်ရေးစပိန်မှကောင်းသောအကြောင်းပြချက် Carl Puigdemont သဘောပဲမရှိသေးပေ။ ပြစ်မှုဆိုင်ရာနောက်တဖန်ပြည်တွင်းနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးငြင်းခုံခြင်းနှင့်ရီဖိုင်းထုံးစံနိုင်ငံရေးရန်ဘက်ပြုသောသူ၏လိုက်စားတဲ့နည်းလမ်းအဖြစ်တွေ့ရှိသည်။ အဆိုပါဂျာမန်တရားရေးကနိုင်ငံရေးသဘောထားအမြင်များပြစ်မှုဆိုင်ရာ၏နာကျင်သမိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံများကိုထံမှစပိန်နိုင်ငံတွင်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးငြင်းခုံများတွင်နှစ်ဖက် ယူ. ကာကွယ်မှုအကူအညီမတတ်နိုင်, အနည်းဆုံးမသငျ့သညျ။ သူတို့နေဆဲပေးပို့လက်ခံလျှင်, တရားရုံးနှင့်နောက်ဆုံးတွင် Catalan မှတဆင့်ဖက်ဒရယ်အခြေခံဥပဒေတရားရုံးမှအယူခံနိုငျသညျ။ စပိန်အတွက်ပါဝါဂိမ်းအဲဒီမှာနောက်ဆုံးပေါ်မှာတစ်ဦးချင်းစီ၏အခွင့်အရေးကိုခွင့်ပြုနေကြသည်ထက် ကျော်လွန်. ယူသင့်ပါတယ်။
→ 10 ကာတာလနိုင်ငံရေးသမားတွေထောင်ထဲမှာများမှာ
1 ။ Jordi Cuixart - ထောင်ဒဏ် 161 ရက်ပေါင်း
2 ။ Jordi Sanchez - ထောင်ဒဏ် 161 ရက်ပေါင်း
3 ။ Oriol Junqueras - ထောင်ဒဏ် 144 ရက်ပေါင်း
4 ။ Joaquim Forn - ထောင်ဒဏ် 144 ရက်ပေါင်း
5 ။ ဒေါ်လိုရေစ် Bassa - ဒုတိယအကြိမ်3ရက်ပေါင်းမတိုင်မီထောင်ချခံရ
6 ။ Raul Romeva - ဒုတိယအကြိမ်3ရက်ပေါင်းမတိုင်မီထောင်ချခံရ
7 ။ ဒုတိယအကြိမ်3ရက်ပေါင်းမတိုင်မီထောင်ချခံရ - Jordi Turull
8 ။ Josep Rull - ဒုတိယအကြိမ်3ရက်ပေါင်းမတိုင်မီထောင်ချခံရ
9 ။3ရက်ပေါင်းမတိုင်မီထောင်ချခံရ - Carme Forcadell
၁၀။ Carles Puigdemont - လွန်ခဲ့သော ၃ ရက်ကထောင်ချခဲ့သည်
1 ။ Toni Comín
2 ။ Meritxell Serret
3 ။ Meritxell Borràs
4 ။ Clara Ponsati
5 ။ အန်နာဂါဗြေလ
6 ။ Marta Rovira
[gallery_bank type = "images" format = "ပန်းရန်" title = "true" desc = "false" responsive = "true" display = "select" no_of_images = "17″ sort_by =" random "animation_effect =" bounce "album_title =" true "album_id =" ၂၁″]
ဖိအားနှင့်ဂရုပြုပါ - ယခုကျွန်တော်တို့ကိုထောကျပံ့! လှူဒါန်းသူအနေဖြင့်သင်သည်ပိုမိုကောင်းမွန်သောကမ္ဘာကြီးအတွက်လူထုဒေါသကိုနှိုးဆွရန်တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သောကူညီမှုတစ်ခုပြုလုပ်နေသည်။ ယခုကွန်ကရစ်ကို သုံး၍ နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်အရှုပ်တော်ပုံကိုဖြစ်နိုင်ချေ။ ငါတို့နှင့်အတူလှူဒါန်းခဲ့သည့်ယူရိုငွေတိုင်းအတွက်သင်သည်ဤမျှလောက်ပုန်ကန်ခြင်းနှင့်ပုန်ကန်ခြင်းများကိုမည်သည့်နေရာတွင်မျှမရရှိပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ ဘ်ဆိုဒ် PixelHELPER.org/Spenden သို့ဝင်ရောက်ပါသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့၏ Facebook ရန်ပုံငွေထောက်ပံ့သူကိုကူညီပါ။
စာနယ်ဇင်းဓာတ်ပုံဆရာ Dirk-မာတင်မူလစာမျက်နှာ Heitzelmann
Light ကအဆိုတော်: pixels ကိုကူညီ၏အဖွဲ့ဝင်
#Puigdemont အတွက်လွတ်လပ်မှုကိုဘာလင်ရှိ Stasi အကျဉ်းထောင်တွင်ထောင်ထားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်စပိန်နိုင်ငံရှိကက်တလန်နိုင်ငံရေးသမားများအားတရားမ ၀ င် # Stasi ကဲ့သို့ထောင်ချခြင်းအပေါ်ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြနေကြသည်။ စပိန်ရှိနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများအားချက်ချင်းပြန်လွှတ်ပေးရန်ကျွန်ုပ်တို့တောင်းဆိုသည်။ #PixelHELPER သည်ဖယ်ဒရယ်အစိုးရအားနိုင်ငံရေးအရခွင့်ပြုချက်မရှိကြောင်းချက်ချင်းကြေငြာရန်ဖက်ဒရယ်အစိုးရအားတောင်းဆိုလိုက်သည်။ အပြန်အလှန်ဥပဒေရေးရာအထောက်အပံ့အတွက်စပိန်တောင်းဆိုမှုကိုထိုသို့သောနိုင်ငံရေးအရအတည်ပြုခြင်းသည်နိုင်ငံတကာအပြန်အလှန်အကူအညီပေးရေးဥပဒေ၏စည်းမျဉ်းများအရတရားရုံး၏တရား ၀ င်ဆုံးဖြတ်ချက်မည်သို့ပင်ရှိစေကာမူလိုအပ်သည်။ အမှု၏အရေးပါမှုကိုထောက်ရှု။ ပေးအပ်ရသည့်အခွင့်အာဏာမှာတရားရေး ၀ န်ကြီး Katarina Barley ၏ဖက်ဒရယ်အစိုးရဖြစ်သည်။ ဂျာမနီရှိအကျဉ်းထောင်မှ Carles Puigdemont အားချက်ချင်းပြန်လွှတ်ပေးရန်ဖက်ဒရယ်အစိုးရအားကျွန်ုပ်တို့တောင်းဆိုလိုက်သည်။
ဖိအားနှင့်ဂရုပြုပါ - ယခုကျွန်တော်တို့ကိုထောကျပံ့! လှူဒါန်းသူအနေဖြင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောကမ္ဘာကြီးအတွက်လူထုဆန္ဒပြပွဲကိုနှိုးဆွရန်သင်တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သောပါဝင်မှုတစ်ခုပြုလုပ်နေသည်။ ယခုကွန်ကရစ်ကို သုံး၍ နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်အရှုပ်တော်ပုံကိုဖြစ်နိုင်ချေ။ ငါတို့နှင့်အတူလှူဒါန်းခဲ့သည့်ယူရိုငွေတိုင်းအတွက်သင်သည်ဤမျှလောက်ပုန်ကန်ခြင်းနှင့်ပုန်ကန်ခြင်းများကိုမည်သည့်နေရာတွင်မျှမရရှိပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ ဘ်ဆိုဒ် PixelHELPER.org/Spenden သို့ဝင်ရောက်ပါသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့၏ Facebook Fundraiser ကိုထောက်ပံ့ပါ။ https://www.facebook.com/donate/1972507843071293
အာရပ်နွေဦးအတွက်အောင်မြင်မှုများဆောင်ကြဉ်းနှင့်ဒီမိုကရေစီ၏အသစ်တစ်ခုယုဂ်ကိုစတငျသငျ့သညျ။ ဒါပေမယ့်ခေတ်ဟောင်း၏သူပုန်များနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားယနေ့ဖြစ်ကြ၏။ ပြည်သူ့နိုင်ငံတကာလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်အဖွဲ့၏စာနယ်ဇင်းလွတ်လပ်ခွင့်စကေးပေါ်တွင် States မှာသင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဘဝအနက်ရောင်ထဲမှာမှတ်သားဖြစ်ကြောင်း risikiert ပြီ, ထောင်ထဲမှာယခုဖြစ်ကြောင်းနှင့်လောကကမေ့လျော့လိမ့်မည်။ ဤတွင်ကူညီနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကြားဝင်နှင့်အခမဲ့ဖြစ်သည်မှလိုလား pixels ။
ကျနော်တို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးအရေးယူပြန်အလင်းထဲသို့ထောင်ထဲမှာမတ်လ 13 ၌ထိုင်သူကို 2011 လူတွေဆောင်ခဲ့ဦးမည်။ အဆိုပါ "ဘာရိန်း 13" အစိုးရပူးပေါင်းကြံစည်မှုများအပေါ်စွဲချက်တင်ပြောဆိုအောင်လှုံ့ဆော်ခဲ့ကြခြင်းငှါ, ဘာရိန်းမြို့တော် Manana အတွက်ဖေဖော်ဝါရီလ 2011 များ၏အဓိကရုဏ်းအပြီးဖမ်းဆီးခဲ့သည်။ ထိုကဲ့သို့သောနိုင်ငံတကာလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်အဖွဲ့နှင့်လူ့အခွင့်အရေးစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့အဖြစ်အတော်များများကပြည်နယ်နှင့်အဖွဲ့အစည်းများလည်းအကြိမ်ကြိမ်နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းဖို့ထောက်ပြတာပါ။ အဆိုပါအကျဉ်းသားမြင်နိုင်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခံခဲ့ရသည်။
အဆိုပါစိုးရိမ်ပူပန်သည့် Familen အဘို့ကိုရပ်တန့်ကြပါဘူး။ ဤရွေ့ကားနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားနေဆဲယနေ့အကျဉ်းထောင်၌ထိုင်လျက်, မျိုးစုံဘဝစာကြောင်းဖို့5နှစ်ပေါင်းတာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြသည်။ လူတိုင်းကသူ့ထင်မြင်ချက်ကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်။ များစွာသောဒီမိုကရေစီနှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးအားပူဇော်ကြ၏ကျွန်တော်တို့ကိုသင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်ခွင့်ကိုရောက်စေဖို့လူကောငျးမြားကိုမေ့လျော့မနေပါနဲ့။
Raif Badawi နဲ့ Julian Assange တို့အတွက်တိုက်ပွဲဝင်မှာပါ။ ဖေဖော်ဝါရီလ 6th, 2021အိုလီဗာ Bienkowski
???????????? ကျွန်ုပ်တို့၏အကျိုးအမြတ်မယူ can`t သင့်ရဲ့ကြင်နာအလှူငွေမပါဘဲ ???? သည်းခံစိတ်၏နာမတော်တှငျကြှနျုပျတို့သည်းမခံသည်းခံဖို့မလက်ျာ claimsoft shoulderstand ပါဘူး ??????? ?????????